Nin kufsaday gabar qoxooti reer Ukreyn ah oo xabsiga la dhigay. - NorSom News
Boolis Foto: Stock Fotage
Nin labatameeyo jir ah oo lagu tuhmay inuu kufsaday gaba r17 jir ah oo qaxooti reer Ukraina ah ayaa xabsifa la dhigay. Ninkan oo ahaa qof horey u geystay danbiyo la xiriira kufsi, ayaa horay loogu eedaeeyey inuu ku xadgudbay 17 dumar ah oo kale.
Ninkaan ayaa sidoo kale lagu eedeeyey inuu ku xadgudbay carruro ka yar 18 sano.
Looyarka gabadha dhibanaha ah ayaa sheegay in xaaladdeeda aan la caddayn karin, ayna tahay mid adag.
Waxay ka soo carartay magaalo bambooyin lala dhacaayo balse waxaan ayeey la kulantay. Maahan wax la sifayn karo ayuu u sheegay NTB.
Ilaa 11.000 oo Ukraine ah ayaa qaxooti ahaan ku soo galay in ka badanna waa la filayaa. Kuwo badan ayaa xaaladahaanoo kale kala kulmay xeryaha qaxootiga waana wax aan loo baahnayn ayeey sheegtay hay,dda soo galeetiga ee UDI.
Booliska ayaa sheegay inay jiraan rag doonayo inay ka faaidaystaan dumarkan oo ah kuwo dhibba,n ahna dad nugul oo qaba dhaawacyo nafsiyeed. Booliska ayaana xeryaha dusha ka ilaalinaaya una taagan inay ilaaliyaan qaxootiga.
Xigasho/kilde: Voldtektssiktet i Tromsø er fra før tiltalt for overgrep mot elleve andre.